FAQ | MCIX Mobile App
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (MCIX Mobile App)
Q: Which phone versions can be available to use MCIX mobile application?
A: Android version - above 5.1 and iOS version - above 8.0 are available.
Q: Do users need any other requirements to use MCIX mobile application?
A: For application security, there will beaprocess to scan the QR code, so you might haveaphone that hasaQR code scanner andagood resolution camera to scan the QR code.
Q: Is there any user role limitation for the Notifications feature?
A: The notification feature is only available for power users and super users as the same workflow as the web portal.
Q: Can the QR code be printed out? Can users re-scan from this printout paper and use it?
A: Of course. Users can print out the QR code. You can scan the printout paper and use it.
Note: Not recommend that printout case because QR codes be changed and printout paper will be lost anytime.
Q: Can someone else get access to enter the application if user lost the QR code printout?
A: By default, it is not possible for anyone to access the QR code.
Notes: In addition to the QR code scanning process at login, you will be able to log in if you have completed all your usernames and passwords. You must keep your username and password as your data security.
Q: Do users need to scan the QR code when log out of the mobile application and log in again?
A: If you log out and log in again, you will need to complete all the steps.
Steps: Sign up User ID and Password, scan QR code and set up new pin.
Q: Are there any user limitations for the MCIX mobile application?
A: The MCIX mobile application is the same as the workflow of the MCIX web portal, so all active user roles running on the MCIX web portal are accessible.
Q: How Lock App works?
A: The application is temporarily locked so that you can log in again without having to re-enter user name and password again.
Q: How Log out works?
A: To log in to the MCIX mobile application withanew account, you must log out and complete the steps from start to finish again.
Steps: Sign up User ID and Pw, scan and set up new pin
Q: What would happen if users do not process in the MCIX mobile application for security?
A: For security reasons, the mobile application will be logged out in 10 to 15 minutes.
Q: Does MCIX charge any subscription fee by using the MCIX mobile application?
A: Currently, there is no subscription fee.
Q: Will there beapayment policy changed in the future?
A: We will notify you if there is any change in the Payment Policy.
Q: Does the user need VPN on/off while downloading the MCIX mobile app?
A: For Android phones, you can download MCIX application in any situation. For iOS phones, VPN must be off as the app store only allows Myanmar location. In addition, the location of the Apple ID must be in the Myanmar region.
Q: Does the user need VPN on/off while using MCIX mobile application?
A: There is no limitation of VPN when users can use the MCIX mobile application.
Q: What does MCIX system do about information security?
A: Downloading any file is not allowed on MCIX mobile application. In addition, the MCIX mobile application requires to enterausername and password, as well asaQR code scanning procedure to safe and secure the information of the mobile application.
Q: How often will an updated version of the MCIX mobile application be out?
A: We will notify you if there are any changes regarding the update.
Q: Is there any changes for data consumption rate while using MCIX application?
A: There will beadata consumption rate changes depending on the usage of the users.
Q: What is the main process of MCIX data sharing between MICX mobile application and web portal?
A: Because MCIX isacloud-based system, the MCIX mobile application follows the same workflow as the MCIX web portal.
Please contact MCIX Support:
Monday to Friday, excluding bank holidays, between 09:00 and 18:00 by email, Skype and telephone.
Skype: MCIX Support
မေး MCIX mobile application အား phone ၏မည်သည့် version တွင်အသုံးပြုလို့ရသလဲ?
ဖြေ : Android version – 5.1 နှင့်အထက် ၊ iOS version – 8.0 နှင့်အထက်ဖြစ်ပါက အသုံးပြုလို့ရပါသည်။
Q: MCIX mobile application အသုံးပြုဖို့ နောက်ထပ်ဘာတွေလိုအပ်သေးလဲ?
ဖြေ : Security မြှင့်တင်ထားခြင်းကြောင့် user name နှင့် password အပြင် QR code ကို scan လုပ်ရမယ့် process ပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် QR code scanner နှင့် QR code ကို scan လုပ်နိုင်တဲ့ camera resolution ရှိသော ဖုန်းဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
မေး : Notifications များအား မည်သည့် user role များမှ မြင်နိုင်ပါသနည်း?
ဖြေ : Notifications (၄) မျိုးအား web portal ကအတိုင်း power user နဲ့ super user တွေကသာ မြင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
မေး : QR code အား print out ထုတ်လို့ရပါသလား? Printout ထုတ်ပြီးသားကို ပြန် scan ဖတ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါသလား?
ဖြေ : Printout ထုတ်လို့ရပါတယ်။ printout ထုတ်ထားသောစာရွက်ကို scan ဖတ်ပြီးအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ (QR code တွေကပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း၊ printout ထုတ်ထားသော စာရွက်များ ပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းအား recommend မပေးပါ။)
မေး : QR code printout ထုတ်ထားတဲ့ စာရွက်ပျောက်သွားခဲ့လျှင်တစ်ခြားသူမှဝင်ရောက် အသုံးပြုလို့ ရပါသလား?
ဖြေ : ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ QR code သီးသန့်ဖြင့် တခြားသူမှဝင်ရောက်အသုံးပြုဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။
Notes: Log in ဝင်တဲ့နေရာမှာ QR code scan လုပ်တဲ့အဆင့်အပြင် User Name, Password အားလုံးပြည့်စုံမှသာ ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ Security အရ မိမိ၏ User Name နှင့် Password များကိုထိန်းသိမ်းထားရန်တော့ လိုအပ်ပါသည်။
မေး : Mobile application ကို Log out ထွက်ပြီးပြန်ဝင်တိုင်း QR code ကို scan ပြန်ဖတ်ရန်လိုအပ်ပါသလား?
ဖြေ : Log out ထွက်ပြီးပြန်ဝင်ပါက step အားလုံးကို အစအဆုံးပြုလုပ်ပြီးဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
(Steps: Sign up User ID and Pw, scan and set up new pin)
မေး : Mobile application တွင် users ကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား?
ဖြေ : Mobile application သည် MCIX web portal ၏ workflow နှင့် အတူတူဖြစ်ပါသဖြင့် MCIX web portal တွင်အသုံးပြုနေသော active user roles များအားလုံးဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မေး : Lock App ၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ဖော်ပြပါ။
ဖြေ : MCIX mobile application ကို Log in ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာ user name ၊ password ပြန်လည်ရိုက်ထည့်စရာမလိုပဲ pin နဲ့ပြန်ဝင်နိုင်ရန်အတွက် application ကို temporary lock လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
မေး : Log out ၏ အလုပ်လုပ်ပုံကိုဖော်ပြပါ။
ဖြေ : Log out ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် MCIX mobile application အားမူလအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် တစ်ဖန်ပြန်လည်အသုံးပြုလိုပါက step အားလုံးကို အစအဆုံးပြုလုပ်ပြီးမှသာ ပြန်လည်ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တခြား user တစ်ဦးအား လက်ရှိအသုံးပြုနေသော mobile device အား လွှဲပြောင်းအသုံးပြုစေမည်ဆိုပါကလည်း မလွှဲပြောင်းခင် Log out ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
မေး : MCIX mobile application ထဲဝင်ပြီးအသုံးမပြုပဲထားရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ?
ဖြေ : Security အရ အသုံးမပြုလျှင် ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်အတွင်း mobile application ကို အလိုအလျောက် lock ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး : MCIX mobile application အားအသုံးပြုခကောက်ခံပါမည်လား?
ဖြေ : လက်ရှိတွင် အသုံးပြုခကောက်ခံခြင်းမရှိသေးပါ။
မေး : နောက်ပိုင်းတွင် payment policy ရှိလာနိုင်လား?
ဖြေ : Payment Policy နှင့်ပတ်သက်၍တစ်စုံတစ်ရာအပြောင်းအလဲရှိပါက အသိပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
မေး : MCIX mobile app ကို download ဆွဲရန်အတွက် VPN လိုအပ်ပါသလား?
ဖြေ : Android phone များအတွက် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို Download ဆွဲလို့ရပါသည်။
iOS phone များအတွက်မူ app store မှ Myanmar location ကိုသာခွင့်ပြုပေးထားသောကြောင့် VPN အားမဖြစ်မနေပိတ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Apple ID ၏ Location သည် Myanmar region ဖြစ်နေဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
မေး : MCIX mobile application ကိုအသုံးပြုနေစဉ် VPN ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါသလား?
ဖြေ : မလိုပါ။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို Application ကိုအသုံးပြု၍ရပါသည်။
မေး : Information security နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများလုပ်ဆောင်ထားတာရှိပါသလဲ?
ဖြေ : MCIX mobile application တွင် မည်သည့် data မှ download လုပ်ခွင့်မပြုထားပါ။ ထို့အပြင် MCIX mobile application ကိုဝင်ရောက်ရာမှာ User name နှင် password များရိုက်ထည့်ရသည့်အပြင် QR code scan ဖတ်သည့်အဆင့်ကိုပါထည့်သွင်းထား သည့်အတွက် တစ်ခြားသူသည် ထို ၃ ချက်ကိုက်ညီမှသာဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
မေး : MCIX mobile app ကို မကြာခဏ version update လုပ်ဖို့ရှိပါသလား?
ဖြေ : လောလောဆယ်မရှိသေးပါ။ Version update နှင့်ပတ်သက်၍တစ်စုံတစ်ရာအပြောင်းအလဲ ရှိပါက ကြိုတင်အသိပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
မေး : Data consumption rate ဘယ်လောက်ရှိနိုင်ပါသလဲ?
ဖြေ : User များ၏ usage ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ data consumption rate ရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
မေး : Data Sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများလုပ်ဆောင်ထားတာရှိပါသလဲ?
ဖြေ : MCIX က cloud-based system ဖြစ်တဲ့အတွက် MCIX mobile application ကိုလည်း MCIX web portal ၏ workflow အတိုင်း တူညီစွာလုပ်ဆောင်ထားပါသည်။